Maitiro ekuverenga uye kunzwisisa mepu yemamiriro ekunze | Network Meteorology
Kuona mamiriro ekunze chinhu chatinoita zuva nezuva. Nekudaro, isu tinogona kusanzwisisa zvakanaka kana munhu wezvemamiriro ekunze akanongedza kumepu. Tinoona mepu yeSpain ine mitsara yakawanda, zviratidzo uye nhamba. Zviratidzo izvi zvese zvinorevei?
Pano iwe unogona kudzidza zvese zvaunoda kuti uzive verenga mepu yemamiriro ekunze uye unzwisise zvakakwana. Iwe unongofanirwa kuramba uchiverenga uye kubvunza kana iwe uine kusahadzika 🙂
1 Nheyo dzekutanga dzemepu yemamiriro ekunze
2 Kukosha kwemhepo yekudenga
3 Zviratidzo pamepu yemamiriro ekunze
3.1 Dudziro yepasi uye yakanyanya kudzvanya system
4 Mhando dzemberi
Nheyo dzekutanga dzemepu yemamiriro ekunze
Mamepu emamiriro ekunze anotipa ratidziro yakareruka yemamiriro azvino kana anotarisirwa mamiriro ekunze munzvimbo. Chakajairika ndechekuongorora pamusoro, nekuti ndipo patinotarisana nemamiriro ekunze. Pfungwa dzakajairika dzemamiriro ekunze dziri nyore kunzwisisa. Vanhu vazhinji vanoda ruzivo nezvake.semvura inonaya, mhepo, kana paine dutu, chimvuramabwe, chando, Etc.
Aya mativi akakosha zvakanyanya kana zvasvika pakunzwisisa nguva. Chii chinotora kuti mvura inaye, nei ichiitika, uye nekukasira kwaichaita. Kuti unzwisise mashandiro emazhinji meteorological misiyano zvakakosha kuti uzive kumanikidzwa kwemuchadenga. Kumanikidzwa kwemuchadenga, muzviitiko zvakawanda, inosarudza mamiriro ekunze. Munzvimbo umo kumanikidza kwemuchadenga kwakakwirira, yakanaka uye yakaoma mamiriro ekunze anokunda. Pane kupokana, kana iri yakaderera, pachave nemhepo ine hunyoro uye yakaipa mamiriro ekunze.
Kukosha kwemhepo yekudenga
Kana paine yakanyanya kumanikidza sisitimu iri pamusoro mhepo yakaoma yemhepo. Izvi zvinodaro nekuti mhepo inotonhorera uye yakaoma kupfuura mweya wakakomberedza. Kana izvi zvikaitika, mweya unorema unodonha kubva pakumanikidza. Panguva ino, ndipo paunenge uine yakanaka mamiriro ekunze uye uine mashoma makore.
Kune rimwe divi, kana isu tine yakadzikira yekumanikidza system, zvinoreva kuti mhepo yemhepo haina kushoma. Izvi imhaka yekuti mhepo yakanyorova kana kupisa. Nekudaro, iwo mhepo yakatenderedza inoenda mukati, kuenda pakati peiyo system, nepo mweya wechiedza uchienda kumusoro. Kana mwenje, mweya unodziya ukakwira wosangana nezvikamu zvinotonhorera, unozotutirana kusvika mumakore. Sezvo makore anokura akatwasuka, makore anozivikanwa emvura anoumbwa.
Mune masisitimu uko iko kumanikidza kwakadzika kwazvo madutu anoumbwa. Makore aya ari kuzogadzira uye kufamba achiyambuka denga. Kuti makore aya aumbe, mhepo inopisa, ine hunyoro inofanira kukwira mudenga zvakakwana kuti ibudise yakatwasuka.
Paunoona mepu yemamiriro ekunze edza kuongorora kuti vanoyera sei kumanikidza. Izvo ndezve kuyera izvo zvinorema nemhepo pasi. Iyo yeyero yekuyera ndiyo mamiribar. Izvi zvakakosha kuti uzive kupihwa yakawanda yemamiriro ekunze inosangana nemhepo yekumanikidza. Izvo zvinoreva kukosha kwekumanikidza pagungwa ndeye 1013 mb. Kana isu tine yakakwira yekumanikidza system, inowanzo svikira hunhu hwe1030 mb. Nekudaro, kana iyo system yakadzikira kumanikidza, hunhu hunogona kudonha kutenderedza 1000 mb kana kunyangwe zvishoma
Zviratidzo pamepu yemamiriro ekunze
Kuti udzidze akanyanya kukosha mamepu emamiriro ekunze, iwe unofanirwa kutarisisa zviratidzo zvekumanikidza. Kuti uverenge iko pamusoro barometric kumanikidza, tarisa isobars. Iyi ndiyo mitsara inoratidzira kukosha kwakafanana kwekumanikidza kwemhepo kumatunhu akasiyana. Ndokunge, kana isu tikaona mepu uko mitsara yeisobar iri padhuze nepadhuze, pachave nemamiriro ekunze akaipa. Izvi zvinodaro nekuti mune chinhambwe chipfupi, hunhu hwekumanikidza huri kuchinja. Naizvozvo, kune kusagadzikana kwemhepo.
Iyo isobar mitsara inoratidza kumhanya uye kwairoenda mhepo. Mhepo dzinonangiswa kubva kunzvimbo dzinenge dziine kumanikidza kwemuchadenga kuenda kune zvishoma. Naizvozvo, isu tichakwanisa kuziva ruzivo urwu nekungoongorora isobar tsika. Kana tichitarisa maisobars akaiswa mumadenderedzwa madiki, iyo nzvimbo inoratidza pakati pekumanikidza. Inogona kuve ese ari maviri akakwirira, aine mucherechedzo A, uye pasi, aine mucherechedzo B.
Tinofanira kuziva kuti mweya haufambe uchidzika mukumanikidza gradients. Iyo inofamba inovatenderedza nekuda kwechimiro cheCoriolis (yekutenderera kwePasi). Naizvozvo, iyo isobars iri munzira yakatenderedza nguva ndeyekuyerera kweanticyclonic uye kuyerera kwecyclonic. Anticyclone inofananidzwa nekupisa kwakanyanya uye yakanaka mamiriro ekunze. Chamupupuri kusagadzikana kwemhepo kunoshandura kuita dutu. Iyo padyo iyo isobars iri kune mumwe nemumwe, iyo yakasimba iyo mhepo inomhanya.
Dudziro yepasi uye yakanyanya kudzvanya system
Kana dutu rikaitika rinowanzoperekedzwa nedutu nekuwedzera kwemakore, mhepo, tembiricha uye kunaya. Izvi zvinomiririrwa pamepu yemamiriro ekunze ine maisobars akanyatsoiswa. Miseve inofamba inopesana newachi kuchamhembe hemisphere uye iine "T" iri pakati isobar.
Mamiriro ekumanikidza akakwirira haamiriri mvura. Mhepo inooma uye ivo vanomiririrwa neH iri pakati isobar. Miseve inotenderera yakananga kumhepo. Munzira inotenderera nguva kuchamhembe kwenyika.
Mumamepu emamiriro ekunze ayo anotitaridza paterevhizheni, mafiratifomu anogona kuoneswa. Kana iyo miganho ikapfuura nharaunda, zvinonyanya kuitika kuti mamiriro ekunze achasiyana. Makomo uye miviri mikuru yemvura inogona kukanganisa nzira yako.
Kune marudzi akati wandei emipendero uye anomiririrwa pamepu yemamiriro ekunze nezviratidzo zvakasiyana. Yokutanga ndiyo inotonhora mberi. Kana kumberi kunotonhora kuchipfuura nharaunda, zvinowanzoitika kuti mvura inonaya inova ine simba uye nemhepo ine simba. Pamamepu emamiriro ekunze anomiririrwa nemitsara yebhuruu nemakona matatu padivi redivi rekufamba kubva kumberi.
Rudzi rwechipiri ndiko kumberi kunodziya. IniZvinoreva kuwedzera kwekushisa kwazvinosvika. Denga rinobuda nekukurumidza sezvo kumberi kunopfuura. Kana mhepo inopisa isina kugadzikana, mamwe madutu anogona kuitika. Ivo vanomiririrwa pamepu yemamiriro ekunze nemitsara mitsvuku uye semicircles padivi kwavari kuenda.
Rudzi rwekupedzisira rwemberi yakavanzika. Iyo inoumbwa apo inotonhora pamberi inosvikowana inodziya. Ivo vanobatana nemamwe meteorological mhedzisiro senge dutu. Panogona kunge paine kudziya kana kutonhora kuvharika. Kana pakavharwa kumberi kukapinda, mhepo inova yakaoma. Ivo vanomiririrwa netambo yepepuru uye semicircles uye mativi matatu munzira yekumhepo.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza kududzira mepu yemamiriro ekunze. Chero mibvunzo, zvisiye mune zvakataurwa. Tichafara kupindura 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Maitiro ekuverenga uye kunzwisisa mepu yemamiriro ekunze
Ndinokutendai zvakanyatsotsanangurwa, ndakave ndakanamatira pakudzidza kududzira nguva zvakanaka.
Ndatenda zvikuru nekuda kwevhidhiyo uye zvinyorwa. Ndadzidza zvakawanda uye ndanga ndichida mimwe mienzaniso.
Nemhepo yawataura kuti iri kuchamhembe kweItaly, uchifunga nezve mhepo inokonzereswa neizvi, kana mhepo ichibva ku Continental Europe, ingava mhepo yakaoma isina mukana wakanyanya wemvura here?
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Kilauea gomo
Chii uye chii chinoputika cyclogenesis chakaumbwa